Dadweynaha xaafadda Goljano oo dawladda uga mahadceliyay bannaynta laag xidhnayd oo khasaare geysatay | Berberanews.com
Home WARARKA Dadweynaha xaafadda Goljano oo dawladda uga mahadceliyay bannaynta laag xidhnayd oo khasaare...
Dadweynaha xaafadda Goljano oo dawladda uga mahadceliyay bannaynta laag xidhnayd oo khasaare geysatay
Hargeysa (Beeberanews) Dhallinyada iyo Wax-garadka xaafada Goljano ayaa soo dhaweeyay tallaabadii dawladda hoose ee Hargeysa ku banaysay good biyo-mareen ah oo shirkadda dhismaha ee Seeraar dusha ka awday, Taasoo khasaare Maaliyadeed ka dhasheen ka dib roobabkii da’ay.
Dadweynuhu waxay uga mahadceliyey cid kasta oo garab istaagtay sidii laagtaasi loo furi lahaa.
Wax-garadka oo shalay shir jaraa’id ku qabtay xaafadaasi ayaa dhanka kalena ka hadlay khasaare kasoo gaadhay laagtaasi la xanibay, waxaanay xukuumadda ugu baaqeen in magdhaw laga siiyo hantidii ka khasaartay oo hore loo qiimeeyay.
“Annagu waanu ognahay Khasaarihii iyo dhibaatadii na soo gaadhay cidda leh, laakiin wali waanu dhulsugaynaa, waxaanu xeerinaynaa jaarnimo oo gogol baa noo taala” sidaasi waxa yidhi Aadan Cabdi Weerar oo ka mid ah wax-garadka xaafada, sidoo kalena ah dadkii khasaaruhu soo gaadhay.
Maxamed Xasan Xaaji oo ka mid ah wax-garadka xaafada, isla markaana ka mid ahaa dadkii guryahoogu daadku galay ee dhibaatadu ka soo gaadhay biyo-mareenka ay shirkadda Seeraar xanibtay, ayaa ka hadlay dhibaatada halkaasi ka dhalatay iyo duunyada iyo dadka ay saamaysay, waxa aanu uu yidhi; “Anigu waxan ahay nin ka mid ah guriga jaarka saddexaad ah, gurigayga waxa iigu yimid biyo gaadhaya mitir iyo badh, hooyaday sariirtii ay ku jiiftay, waxanu kaga qaadnay gacantayada annaga oo toddoba nin ah, maalina maanaan soo istaagin warbaahinta, waayo waxa nagga liita oo nagga xun oo dhibaato taayada ka weyn ay markii afraad soo gaadhay reerkaa Ilma Cabdi Jaamac. Waxanu codsanaynaa in la naggu soo noqdo oo laagtaasi ummadda illaahay ee maanta ku basbeelay ha loo naxariisto.” Ayuu yidhi
Geesta kale waxa ay u mahadnaqeen madaxweynaha iyo dawladda hoose ee fulisay amarkii madaxweynuhu ku faray in la baneeyo laagta, balse waxay sheegeen in loo baahan yahay in la dhamaystiro banaynta laagtaasi oo ay wax u dhiman yihiin
“Marka koowaad Illaahay baanu uga mahadcelinaynaa, marka labaadna madaxweyna ee intuu goobta yimid indhihiisa ku arkay ee isagu yidhi ha la baneeyo, waxaanu ku sii mahadinaynaa dadkii uu faray arrinkaasi ee fuliyey, hase yeeshee waxa aanu jecelnahay, imikana ay dantu noogu sii xidhan tahay inaydaan intaana ka tagin ee inta ka dhiman ee wali xayiraysa ee garaa’idka iyo intaa lagu soo durkayna in la dhamaystiro. Maalintii la baneeyay inta reer ee gama’day ma malaynaysid, laakiin habeenkaas laagtu awdnayd dhibaatadu boqolaal guri ayay gaadhay.”
Shirkadda Seeraar oo ay leeyihiin Ilma Seerar ayaa dusha ka xidhay Laag (Diriinayj) ka mid ah laagaha mara degmada 26-ka June, gaar ahaana xaafada Gol-jano, taasi oo dhibaato badan keentay kadib markii ay cidhiidhiday biyihii halkaasi mari jiray, waxaana dhacday in Madaxweynuhu amar uu bixiyey oo uu siiyay Dawladda hoose ee caasimada Hargeysa, lagu furay laagtaasi la awday.
Previous articleDawladda Somalia oo xil u magawday Nimcaan hilaac oo hore uga tegay Xiddigaha Geeska
Next articleGolaha Madasha Wada-tashiga Somaliland oo sharci-jebin ku eedeeyay Madaxweyne Biixi